Kitapo Shina anaty boaty ho an'ny ranom-boankazo (kitapo aseptika 1-10litatra) mpanamboatra sy mpamatsy |Nanhua
3. Ny kitapo tsirairay dia namboarina manokana mba hitehirizana ny ranon-javatra marina ao anatiny, mba hiantohana ny atiny tsy ho voaloton'ny rivotra any ivelany.
Ny fahapotehan'ny ranom-boankazo dia dingana sarotra be noho ny antony maro.Mandritra ny fanodinana ny ranom-boankazo, ny fanindriana, ny fanivanana, ny fanadiovana, ny homogenizing ary ny fifangaroana, ny fifandraisana matetika amin'ny ranom-boankazo amin'ny rivotra dia singa ivelany amin'ny fahasimbana sy ny fahasimban'ny ranom-boankazo.Rehefa ambony ny mari-pana amin'ny tontolo fitehirizana ary mety tsara ny toe-pahazavana, dia miteraka fahasimbana biochemika ny ranom-boankazo.Ny ranom-boankazo dia manankarena amin'ny otrikaina isan-karazany, anisan'izany ny proteinina, asidra organika, tannins, pigment, vitaminina sy mineraly, sns., Ireo akora ireo, eo amin'ny dingan'ny fanodinana sy ny fitehirizana, ny teknolojia tsy mety ary ny toe-piainana ratsy amin'ny tontolo iainana dia hahatonga azy hamokatra karazana Cheung's. fanehoan-kevitra simika.
Voalohany, ny kitapo ao anaty boaty dia sterilized amin'ny taratra.Ny kitapo dia sterile tanteraka ary azo fenoina amin'ny ranom-boankazo mba hahazoana antoka fa ny ranom-boankazo dia manana fiainana maharitra amin'ny mari-pana amin'ny efitrano;Faharoa, ny ranom-boankazo dia manana fepetra samihafa amin'ny fampitana oksizenina, fampitana ny entona rano ary ny toetry ny hazavana.Ny kitapo ao anaty boaty dia mizara ho sakana mahazatra sy sakana avo.
Raha ampitahaina amin'ny tavoahangy fitaratra, tavoahangy PET na fonosana taratasy hafa, dia azo sokafana imbetsaka ny valva amin'ny kitapo ao anaty boaty.Noho ny hery misintona, raha mivoaka ny ranom-boankazo, dia tsy afaka miditra ao anaty kitapo ny rivotra.Noho izany, ny ranom-boankazo ao anaty kitapo ao anaty boaty dia manana fe-potoana fitehirizana mihoatra ny telo herinandro na dia aorian'ny fanokafana azy aza.
teo aloha: Kitapo anaty boaty ho an'ny atody misy rano (sarimihetsika mazava 1-20Litra)
Manaraka: Kitapo anaty boaty ho an'ny simika (sarimihetsika mazava 1-20Liter)